Alarobia 02 Oktobra 2019. – FJKM
Alarobia 02 Oktobra 2019.
Ny bokin’i Jeremia dia mitantara amintsika ny zava-nitranga tamin’ny fotoana nanjakan’ireo mpanjaka faramparany tany Joda hatramin’ny fahababoana (and1-3). Manomboka amin’ny fiantsoana an’i Jeremia izany .
1-Tsy takatry ny saina ny fiantsoan’ny Tompo
Niantso an’i Jeremia Izy ary lazainy fa efa hatrany am-bohoka izy no efa fantatra sy nofidiny . Any ivelan’ny fahatakarantsika amin’ny maha- olombelona izany .
2-Asa mampidi-doza no niantsoan’ny Tompo
Nantsoiny i Jeremia ho « mpaminany ho an’ny firenena » handrodana inefatra vao hanorina sy hamboly . Asa mafy re izany ! Ary dia hiadian’ny olona (and19) izy amin’izany . Ekena fa tsy mora ny asan’ny Tompo .
3-Tsy mahagaga raha misy ny nandà ny antson’ny Tompo
Nataon’i Jeremia avokoa izao fialan-tsiny izao : « tsy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza aho... « Moa tsy fihetsika efa nataon-dry i Mosesy (Eks3.4) sy i Gideona (Mpits 6) koa ve ny toy izany ? Ary isika koa!
6- Saingy tsy misaraka amin’ny fombàny ny fiantsoany
« Aza matahotra azy ianao, fa momba anao Aho , hoy i Jehovah »(and8) . Io ihany no ianteherana . Ary ny hany andrasana amin’izay antsoina dia ny fanahin’ny fankatoavana : « handeha amin’izay rehetra hanirahako anao ianao , ary izay rehetra handidiako anao no hambaranao « (and7) . Koa mahereza ry olom-boaantso . Tena momba anao i JESOA !
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6